Uhlaziyo lwe-COVID-iBhanki yokutya yaseGalveston County
IGalveston County Food Bank kunye namaqabane ethu ziinkonzo ezibalulekileyo, kwaye kubalulekile ukuba sihlale sisebenza ngelixa sisebenzisa ezona ndlela zokuzikhusela. Ngala maxesha akhoyo ngoku, siyaqonda ukuba ukubhencwa kunokuba ngaphezulu 'nini' hayi 'ukuba', kwaye kuba sisakhiwo sikawonke-wonke siza kuhlaziya apha nje ukuba sazi ukuba bekukho amatyala abantu aqinisekisiweyo Ibhanki yokutya. Sifuna ukuba selubala kangangoko, ngelixa singongezi kulo naluphi na uloyiko.
Siza kuhlala sisebenza, ngelixa sisebenzisa ezona ndlela zokukhusela zifumanekayo.
Siyaqhubeka nokubeka iliso kukhuseleko, silandela ngamandla ukhuseleko lweCDC kunye neenkqubo zokucoca.
Amanyathelo okhuseleko kumavolontiya, kwiindwendwe nakubasebenzi:
Silandela I-CDC icebise iinkqubo zokucoca inzalo kwaye sandise ukuphindaphinda kokucoca kunye nokubulala iintsholongwane, ngakumbi kwiindawo ezihamba abantu abaninzi (iindawo zamavolontiya, iilifti, amagumbi okuhlangana, amagumbi okuhlambela, iindawo zokutya).
Bonke mabanxibe isigqubuthelo ebusweni xa bengena kwigumbi lokungenela i-GCFB.
Amaqondo obushushu athathwa kuwo onke amasango okungena: abasebenzi, amavolontiya kunye naziphi na iindwendwe.
Abasebenzi kunye namavolontiya bayacelwa ukuba bagcine ukudana kwezentlalo kwaye ukuba abakwazi kufuneka banxibe ubuso. .
Amavolontiya asebenza kwiiprojekthi zokugcina iimpahla kufuneka ahlambe izandla ngaphambi kokuba aqale ukutshintshwa, ngexesha lekhefu, xa betshintsha iiprojekthi nasemva kokutshintsha kwabo. Iiglavu zikwakhona ukunxiba iiprojekthi zokugcina. Sithatha amaqondo obushushu sakufika ..
Abasebenzi baziqhelanisa nendlela 'yokuvasa, yokuhlamba ngaphandle'. Yandisa ukuhlamba izandla. Ukucoca iindawo zabo zokusebenza rhoqo. Amaqondo obushushu ayathathwa xa kufikwa ..
Zonke iindwendwe kunye nabasebenzi babonisa iindlela zokuhamba-hamba eluntwini. Ex. Amavolontiya acetyiswa ukuba asebenze i-6 iinyawo ngokwahlukeneyo xa kunokwenzeka kwaye ubuncinci ubude beengalo ngaphandle ..
Ukukhuthaza nabani na oziva engaphilanga ukuba ahlale ekhaya.
Ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane:
Nini / ukuba imeko eqinisekisiweyo yenzeka, indawo apho umntu ebekhona iya kucocwa kakuhle kwaye silandela imigangatho ye-CDC ecetyiswayo yokucoca nokubulala iintsholongwane. Abantu abadibana ngokusondeleyo nomntu baya kwaziswa.
Ukutya akwaziwa ukuhambisa i-coronavirus. Ngokwangoku kutsha nje Isiteyitimenti esikhutshwe yi-US Food and Drug Administration, “Asazi naziphi na iingxelo ngeli xesha lokugula kwabantu ezithi i-COVID-19 ingadluliselwa ngokutya okanye ukupakishwa kokutya.”Njengezinye iintsholongwane, kungenzeka ukuba intsholongwane ebangela i-COVID-19 ingaphila kumhlaba nakwizinto. Ngeso sizathu, kubalulekile ukulandela amanyathelo abalulekileyo ama-4 okhuseleko lokutya-ucocekile, wahlukile, upheke kwaye ubande.